Cajal: Tilmaame Super ah si loo xakameeyo Spam Referrer ee Google Analytics
Nik Chaykovskiy, khabiir ka socda Semt , wuxuu hubiyaa in spam gudbinta ay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ay webmasters la kulmaan. Xaaladdu way ka sii xumaatay sanadaha, taas oo macnaheedu yahay in qof meel ka helo lacag badan oo abuuraya spam gudbinta.
Spam Ghost & Referral Spam
Spam hadda waxay samaysay habka ay u socoto wargeysyada Google Analytics - home and small office network. Spammers waxay eegayaan dayacaanka nidaamka si ay ugu muuqdaan warbixinnada macluumaadka ee boggaga. Waxay u sameeyaan rajada ay u leeyihiin in ay keenaan xiiso ku filan barta in webmaster ay booqdaan website-keeda si ay u arkaan sababta ay ugu jiraan warbixinta. Dhibaatadu waxay tahay in aysan kordhin taraafikada. Xitaa ma sameeyaan tan iyo markii ay dhaleen. Waxay isticmaalaan code-yada JavaScrip oo ay isticmaalaan Google Analytics si ay u sameeyaan ogeysiis ah in uu jiro booqasho. Waxay ku dhameeyaan tirakoobka tirakoobyada muhiimka ah sida qiimaha bounce iyo walxaha kale ee loo isticmaalo in lagu falanqeeyo ka qaybgalka. Waa lagama maarmaan in la joojiyo spam u gudbinta haddii mid loo baahan yahay xog sax ah gaar ahaan haddii ay ku tiirsanaanayaan si ay u sameeyaan go'aano suuq.
Way adagtahay in la xakameeyo spam gudbinta gaar ahaan maadama spamerku si aad u dhakhso badan u shaqeeyaan, sii kordhaya qiyaasta spam hits iyo sidoo kale ilaha. Waxay macnaheedu tahay in webmasterku u baahan yihiin inay hagaajiyaan dadaalka ay ku tirtirayaan iyo ka tirinta liisaska ilahaas. Waxay si gaar ah dhib ugu tahay dadka haysta goobo cusub oo aan helin taraafikada sharciga ah. Kororka sicirrada spam ee goobahaas ayaa soo bandhigi kara isku dheelitirnaan dheeraad ah oo laga yaabo in ay ka badan tahay maalin kasta hits ay hesho.
Sidee u fududahay?
Xogta halmar oo bog ah oo ah hal booqasho. Spammers Ghost waxay isticmaalaan koodhka raadinta Google Analytics waxayna u diraan xogta taraafikada si toos ah warbixinnada, si ay u galaan booqasho. Waxay qaadan kartaa 0.001 ilbiriqsi si aad ugu dhajiso hal bog oo ku yaala server ah meel..Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in ay ku qasbeen in ka badan 100 booqashadood oo caan ah oo lagu galo xisaabaadka Google ee goobo badan oo kale. Way fududahay inaad iibsato hal marti. Ilaa inta spamiyeyaasha hubinayaan ROI, waxaa jira waxyeello badan oo ay la geli karaan iyaga.
Solutions oo soo Bixiya
Farsamooyinka qaar ayaa mararka qaarkood aad u sarreeya oo ah xalka loo adeegsado joojinta spam gudbinta ma shaqeynayo. Mid ka mid ah adeegga internetka ee qarsoodiga ah ee loo yaqaan Darodar. Qodabadan soo socdaa ma cadeeynin GA.
Faylka .htaccess. Ma shaqeyneyso tan iyo spam galka ma taabto goobta
Liisaska ka-reebitaanka soo-gudbinta. Waxaa ka maqan cusbooneysiinta.
Foglayaasha ka-reebista. Waa qaab habboon maaddaama ay kaliya diiradda saarayso spam mustaqbalka oo aan dib-u-noqosho lahayn ee kaydka xogta hore ee spam.
Shaandhaynta Ka-saarista waxay u dhowdahay inay ku dhowaato baabi'inta spam gudbinta Darrada. Xaddidaadda keli ah waxay ahayd inuusan lahayn liis joogta ah oo joogto ah oo liis gareynaya liisaska.
Qeybta Qalinjabinta Qalinka
Xalka tallaabada ah ee lagu aqoonsanayo iyo xannibidda macluumaadka gudbinta iyo xogta gawaarida waa in la cusbooneysiiyaa, ka yimaadaa xogta ballaaran, iyo dib u noqoshada macluumaadka hore. Iyada oo ku saleysan saddexda qodob ee xalka ugu fiican, halkan waa mid shaqaynaya.
Talaabada 1aad: Isticmaalka Qeybaha Ka Jirta Spam
Way ka fiican tahay in la isticmaalo qaybaha maaddaama aysan wax isbeddel ah ku sameynin xogta si joogto ah. Haddii mid si qalad ah u faafiyo masruufaha dhabta ah marka la isticmaalayo shaandhada, ma jirto habka dib loogu celiyo. Waxaa suurtogal ah in la dhiso xogta hore iyadoo la adeegsanayo qaybo, inkastoo muddada uu jirey. Mid ayaa sidoo kale ka codsan kara iyaga horayba.
Talaabada 2aad: Joogitaanka Liiska Dibada
Joojintu waa qalab ay webmasters u isticmaali karaan inay kormeeraan ilaha tixraaca..Waxay ku ogeysiineysaa isticmaalaha wixii khuseeya soo-diritaan cusub oo ay ku siiyaan: Si ay u noqdaan kuwa xayeysiinaya ama liis gareynaya ilaha gudbinta shaki ku jiro.
1. Yarku wuxuu helayaa dhammaan u gudbinta, iyo
2. Waxay isticmaalaysaa PHP si loo kala sooco dhammaan natiijooyinka si loo tiriyo tirinta, ka dibna loo gudbiyo liiska kama dambaysta ah ee webmaster si aad u aragto haddii aad aragto qof yaqaan. Haddii kale,
3. Waxay u gudbinaysaa dhamaanba tuhunka la tuhunsan yahay in ay u rogaan jidka kaniisadaha kaas oo bixiya ikhtiyaarka u dhexeeya muusikada ama liiska madow. Xulasho kasta oo ay doortaan, waxay u horseedaa tallaabo 4,
4. Waxay u direysaa boga caddaynaya go'aanka sida xaqiijinta xulashada.
5. Kaddibna wuxuu dukaameystaa oo wuxuu xayuubiyaa dhammaan xogta loo yaqaan 'spammers' ee diiwaanka
6. Bandhigga ugu dambeeyay ee xogta nadiifka ah ayaa noqon doonta qaabka loo yaqaan 'regex'. Isku duub oo ku dheji Google Analytics.
Qaboojintu waxay u oggolaaneysaa dadka websaydhku inay cusboonaysiiyaan liiska ka-reebitaanka ugu yaraan shan jeer maalintii.
Xaqiiqada, Dhawr Xalliyadoodu way shaqayn karaan:
Inkasta oo ay tahay habka la xaqiijiyay, waxay ka shaqeyn kartaa xitaa haddii webmaster ay ku darsato farsamooyinka kale, si loo hubiyo inay daboolaan dhamaan saldhigyada. Marka lagu daro xalalkan:
Ku dhaji sanduuqa koontaroolka ee keena Google Analytics inuu ka saaro qoryaha la yaqaan iyo caarada,
Codso "ku dar falanqaha martida",
Shaandhaynta guud ee kor lagu soo xusay ayaa mararka qaar waxtar leh, laakiin ma ahan xalka ugu fiican ee mustaqbalka fog sababtoo ah:
Aqoon-is-weydaarsiga lama huraan maaha in la sameeyo, iyo spammers falanqeeyayaasha ayaa sii kordhaya iyada oo loo adeegsanayo inay noqoto mid nugul.
Haddii qaladku uu khaldan yahay, waxaa laga yaabaa inay dhammaato shaandhaynta sooyaalka dhabta ah